Intsingiselo yamakhadi eetaroti, iimfihlo, iingxaki
Kule nqaku uza kufunda Intsingiselo ye amakhadi e-tarot eyona nto ibaluleke kakhulu kuyo nayiphi na indawo esemgangathweni. Funda kwaye ube yingcali kwicandelo.
Ikhadi ngalinye linentsingiselo yalo
1 Intsingiselo yamakhadi eTarot
2 Intsingiselo yamakhadi e-tarot: Major Arcana
2.6 Ivili lethamsanqa
3 Intsingiselo yamakhadi eTarot: INcinci iArcana
3.1 Iikomityi ezilishumi
3.2 Amakrele alishumi
3.3 IiWands ezilishumi
3.4 Igolide elishumi
Intsingiselo yamakhadi eTarot
Iseti yamakhadi eTarot asetyenzisiweyo namhlanje avela kumgangatho osetyenziswa e-Itali XVI, ngakumbi emantla alo mmandla.
Le deck imelwe ngamakhadi angama-78 ewonke, nawo ahlulwe aba ngamaqela amabini amakhulu, i Omkhulu uArcana kunye neArcana encinci. Siza kuthetha ngeqela ngalinye ngokweenkcukacha ezingezantsi.
Intsingiselo yamakhadi e-tarot: Major Arcana
Iileta zeli qela zibonisa imiba esisiseko ebomini bomntu ocela uthethathethwano. Ngenxa yoku, ziqwalaselwa ngabaninzi njengezona zibalulekileyo kumgangatho.
Phakathi kwemiba emelwe ngala makhadi bubomi kwaye ukufa, ubumoya, indlela umntu ahambelana ngayo nabanye, kunye nokuphazamiseka kokuziphatha kunye nobuchwephesha.
Ngokwesiqhelo, ezi leta zibonisa uhambo lomcebisi ngexesha lobomi bakhe kunye neziganeko ezifanelekileyo koku. Inani elichanekileyo lamakhadi kweli qela ngama-22.
Ukwazi i Intsingiselo yamakhadi eTarotKubalulekile ukuba wazi ukuba ezi zinto zifuna ukudlulisa ntoni. Masibone ke ukuba ezinye ze-Major Arcana zithetha ntoni.
Eli lelinye lawona makhadi abaluleke kakhulu kumgangatho weTarot. Ngokwesiqhelo kukubonisa iziqalo kunye neziqalo ezintsha, kunye notshintsho olunokubona ngathi kunzima.
Oko kumelwa leli khadi kunxulumene nabo bantu banezakhono zonxibelelwano ezifanelekileyo, abazimiseleyo nabenza ngokusekelwe kwizimvo zabo. Nangona kunjalo, impumelelo kwinto oyicebisayo iya kuxhomekeka kula mandla esigqibo kunye nokuzithemba kuwe.
Umfundisikazi unento yokwenza nesipho se-intuition. Intsingiselo yeli khadi ekusasazeni kwakho ikuxelela ukuba kuya kufuneka ubeke phambili intuition ngaphezulu kwesizathu.
Mhlawumbi into ofuna ukuyidlulisa ngale leta, kukufika koncedo lomnye umntu ebomini bakho, nangokwemvelo. Kwelinye icala, inento yokwenza neemfihlo okanye iimeko ongazaziyo kodwa eziya kukuchaphazela ngandlela thile.
UKumkanikazi inento yokwenza noxolo lobomi bakho bomtshato. Kananjalo, njengoko imelwe ukubhekisa kwicala loomama labantu, inokuba sisalathiso sokuba usondele okanye ukufuphi ukuqala usapho lwakho.
Le leta ibonisa impembelelo okanye impumelelo yemisebenzi enxulumene nayo yonke into ebandakanya ukusetyenziswa kwemiba yoyilo. Ngokwesiqhelo, uKumkanikazi umele uluvo oluhle okanye imiqondiso ngawe, usapho kunye nabahlobo.
Ukuba ukubaleka kwakho kuyaphuma Umhlaba, utshintsho olubaluleke kakhulu lusondela ebomini bakho, oku kuyakumema ukuba ushiye elidlulileyo ngasemva kwaye uqhubele phambili kwinto entsha egcinelwe i-Universe.
Kwakhona, ilizwe lithetha ukukhula ngakumbi kunye nokuqonda kwehlabathi, kunye nesiqu sakho. Kwangokunjalo, inokudlulisela ithuba lokuba kwixa elizayo unokwenza iihambo ezithile.
Eli lelinye ikhadi elithetha ngeziqalo, zibonisa amanqanaba obomi bomntu. Inxulumene neemeko ezilungileyo ngokubanzi, ezixhomekeke kumathuba.
Umyalezo onokufunda kuwo Ivili lethamsanqa, kukugcina phantsi kolawulo zonke ezo zinto zinokwenzeka kwaye, ungalahlekelwa yimithambo-luvo yakho phambi kwabo baphantsi kolawulo lwakho.
Intsingiselo yamakhadi eTarot: INcinci iArcana
I-Arcana encinci yeTarot ifanekisela iintshukumo zemihla ngemihla kunye neziganeko, okwenzekayo mihla le. Inani lamakhadi akweli qela angama-56.
Ngokunjalo, la makhadi angama-56 ahlelwa ngokwamaqelana amane: iikomityi, iifotsholo, iiklabhu, igolide. Ezi zinto zihambelana ngokomyalelo apho zinikezelwe khona ezintliziyweni, umhlakulo, iiklabhu kunye needayimane, ngokwahlukeneyo (kwiidesika zemveli).
Nganye yeesuti ezincinci zeArcana iqulethe amakhadi ali-10 aqala kwi-Ace ukuya kwelishumi. Ngokunjalo, amakhadi amane afakiwe abonisa inani elilinganayo lemifanekiso: uKumkanikazi, uKumkani, iphepha, uKnight.
Makhe sihlalutye ngononophelo intsingiselo yeLishumi (10), kwisuti nganye eyenza eli qela lamakhadi eTarot.
Ngokwesiqhelo, isuti yeglasi inxulunyaniswa nenxalenye yamanzi kunye neempawu zeemvakalelo zomthengi. Banxulumana neempawu ze-zodiacal, iPisces, iScorpio kunye neCancer.
Kwimeko yeeNdebe ezilishumi, iimvakalelo azinakubakho. Imele impumelelo, uxolelwaniso, ukusonjululwa kwempixano yeemvakalelo kunye nobudlelwane obomeleleyo.
Isuti yomhlakulo ifanekisela into yomoya, iimpawu zengqondo yomntu kunye neempawu zodiac Libra, Gemini kunye neAquarius.
Ezilishumi zeekrele lelinye lamakhadi ayoyikwa kakhulu kwiTarot, kungenxa yokuba ubukho bayo bubonisa iimeko ezimbi ezingenakulawulwa okanye ukunqandwa.
Ngokungafaniyo neesuti zangaphambili, erhabaxa inento yokwenza nobuchwephesha, isixhobo somlilo, kunye neempawu Aries, Leo kunye neSagittarius.
Kwimeko yeeShumi zeWands, babonakalisa umsebenzi ogqithisileyo, nokuba kungokukhangela injongo entsha okanye ngenxa yokuba uyiphumezile kwaye ngoku uxanduva olungaphezulu kolokuhambelana nawe.
Isuti yokugqibela, isuti yegolide, imele izinto, ukuthandana kunye nomhlaba. Iimpawu zezodiacal ezichongiweyo kunye neli khadi zezi: Capricorn, Virgo kunye ne Taurus.
Kubukho beGolide elishumi, unokuqiniseka ukuba unamandla emali kunye nokulingana phakathi kweemvakalelo zakho. Nangona kunjalo, ayisiyonto inikezwe ngoonobumba kodwa kunoko, kuyinyani ukuba umntu obonisanayo uthanda yena.
Inxulumene nelifa, kodwa kunye nomgangatho wobudlelwane phakathi kwabantu, Oko kukuthi, ubudlelwane obugcinayo nosapho kunye nabahlobo bakho.
Ukuba unomdla wokwazi okungakumbi malunga nezinye iArcana ezincinci, ngenisa eli khonkco lilandelayo kwaye udibane nomkhulu Iphepha lamaWands.